पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक महत्वको भएर पनि भग्नावशेषको अवस्थामा रहेको मकवानपुर गढी
मकवानपुर जिल्ला,मकवानपुर गढी गाउँपालिका वडा नं. २ मा पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक महत्व रहेको किल्ला मकवानपुर गढी रहेको छ । यो गढी हेटौडा बजारबाट १७ कि.मी. पूर्व, कान्ति राजपथको नजिक रहेको छ । यातायातको सुविधाको कारण यस स्थानमा सजिलै पुगेर अवलोकन गर्न सकिन्छ ।
कान्ति राजपथको बाटोबाट गढी तर्पmको केही उकालो बाटो गएपछि मोटर पार्क गर्ने स्थान आउदछ । त्यहाँ रहेको द्वार प्रवेश गरी केही खुड्किला चढेर माथि गएपछि गढी परिसर पुगिन्छ । गढीलाई वाहिरी आक्रमणबाट कसरी सुरक्षित वनाउन सकिन्छ भन्ने जानकारी यस गढीको निर्माण शैलीबाट जानकारी लिन सकिन्छ । गढीलाई सुरक्षित वनाउनको लागि वाहिर चारैतर्पm वारपार गर्न नसक्ने गरी खोल्सा (खोल्ची) को निर्माण गरिएको छ । यो खाल्साको तल भूईको चौढाई ५ फिट ४ इन्च रहेको छ । गढी प्रवेशका लागि उत्तर तर्पm काठको पुल राखिएको छ । यो पुलको लम्वाइ १९ फिट लामो रहेको छ । सोपुलको माध्यमबाट भित्र गढीमा प्रवेश गरिन्छ ।